Amazon dia mamerina ny tenimiafin'ny mpampiasa maro | Vaovao IPhone
Ny mpanjifa Amazon sy ny orinasa mihitsy dia efa niasa andro vitsivitsy. Vao tsy ela akory izay, ny orinasan-tserasera mivarotra an-tserasera dia nanisy fanovana ny rafitry ny famantarana azy ary nampihatra ny rafi-pamantarana dingana roa, nahatonga ilay sehatra ho azo antoka kokoa. Ankehitriny, noterena i Amazon hamerina indray ny tenimiafin'ny mpanjifa tsy fantatra nefa tsy fantatr'izy ireo taorian'ny fangalarana tenimiafina goavambe. Tsy nisy data momba ny halatra fampahalalana na ny isan'ireo teny miafin'ny orinasa navoaka ampahibemaso.
Ny tolo-kevitr'i Amazon dia tototry ny fifandraisan'ny mpanjifa manontany ny antony nahazoany mailaka avy amin'ny orinasa milaza amin'izy ireo fa novaina ny teny miafiny. Io hafatra io ihany dia efa nalefa tamin'ny mpanjifa tamin'ny alàlan'ny rafitra fandefasan-kafatra anatiny, ka io dia narahin'ny orinasa fa nandray izany fanafihana izany.
Ao amin'ny mailaky ny fifandraisana mihitsy, nosakanana tsy hieritreritra ireo mpiserasera fa tandindomin-doza ny tenimiafin'izy ireo tany am-boalohany na nahatratra antoko fahatelo tamina fikasana ratsy ity fampahalalana ity, saingy voamarina fa ny fanovana tenimiafina dia ampahany amin'ny rafitra fisorohana fepetra arahin'izy ireo protokolà fitandremana Amazon. Ity dia fepetra marketing tena mazava, satria raha misy zavatra ankafizin'ny mpanjifa amin'ity karazana toe-javatra ity dia ny fitandremana ny orinasa, na dia misy fihoaram-pefy na fihoaram-pefy aza, toy ny fanovana ny teny miafin'ny mpampiasa raha tsy misy ny fanekeny.
Noho izany rehetra izany, ny herinandro dia nifantoka tamin'ny fiarovana, ao afovoan'i Amazon. Voalohany ho an'ny fampandehanana ny rafitra famantarana amin'ny dingana roa ary ankehitriny ho an'ny hafatra fampitandremana ho an'ireo mpampiasa sy ny famerenana ny teny miafina. Izany rehetra izany, alohan'ny zoma mainty, ao anatin'ny herinandro feno tolotra sy fifamoivoizana betsaka amin'ny tranonkala.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Namerina ny tenimiafin'ny mpampiasa maro i Amazon
Podcast 2x12 an'ny Actualidad iPad: ny iPhone 7 miaraka amin'i Stylus, ilay Apple Watch vaovao ary tsaho maro hafa
Nohavaozina indray ny telegram manampy fiasa vaovao